Farmashiyaha RXS ayaa kuu oggolaanaya inaad iibsato daawooyin adiga oo aan dhakhtar qorin - su'aalo la weydiinin - haba yaraatee!
Farxada iibsashada Daawooyinka iyadoon dhakhtar qorin. Rijeeto la'aan? Dhib malahan!
Daawooyin tayo sare leh oo aan dhakhtar qorin
Shirkadeenu waa farmashiye internet sumcad leh oo bixiya tiro aad u tiro badan oo ah alaabooyinka dawooyinka, iyada oo aan la qorin ama aan lahayn. Baahiyaha macmiilka casriga ah, ee awooda inuu dawooyinka kaga iibsado internetka, waxaan ku faraxsanahay inaanu bixinno adeegyada si aad daawadaada ugu hesho sida ugu dhakhsaha badan uguna fudud ee suurtogalka ah.
Iyada oo leh aag gaarsiin ballaaran iyo adeeg macmiil oo aad u fiican, waxaan awoodnaa inaan la kulanno baahiyaha dhammaan macaamiisheenna qaab xilli ku habboon oo habboon leh.
Iibsiga daawooyinka; Fudud!
Dukaamadeena dawada ee internetka ma sahlana oo kaliya in la maro, laakiin sidoo kale waa mid aad u dhakhso badan. In kasta oo dad badani ay wax ka qabtaan taraafikada iyo safafka dhaadheer ee ay ku aadaan farmashiyahooda xaafadda, waxaad fadhiisan kartaa jikadaada ama xafiiskaaga oo aad dalban kartaa isla daawo.
Awood u lahaanshaha helitaanka daawada iyada oo loo marayo farmasiga dhimista ee internetka ayaa awood siinaya bukaanada, waxayna u ogolaaneysaa iyaga inay la wareegaan maamul wanaagooda.
Daawooyinka la keenay
Farmashiyeyaal ruqsad haysta
Maxay macaamiishu ka yiraahdaan annaga
Dadku way jecel yihiin wax soosaarkayada 70% macaamiisheenuna waxay soo celinayaan macaamiishoodii. Waxaan aaminsanahay in sida kaliya ee ganacsi fog lagu sameyn karaa ay tahay caawinta dadka.
Daawooyinka tayada leh
Daawooyinka laga iibsado khadka tooska ah waligey igama fududeyn. Waan necbahay uun su'aalaha foomka lagu diro ee farmashiyaha kale ee internetka laga helo. Nasiib wanaag Farmashiyaha RXS tani muhiim maahan!
/ Weriye, Fahan
Naqshad qurux badan & fududahay in la maro farmashiyaha internetka. Daawooyin badan ayaan ka iibsaday & waligaa ha ka qoomamayn. Sii wad shaqooyinkaaga wanaagsan!
/ Suuqa, UK
Farmashiyadeyda 1-aad ee UK
Dhowr sano ayaan la ildaranaa hurdo la’aan iyo kiniiniyada hurdada ayaa ah waxa kaliya ee aniga i caawiya. Farmashiyaha RXS ugu dambeyntii waa suurtogal in la iibsado kiniiniyada hurdada iyada oo aan dhakhtar qorin.
/ Wakaaladda, NY
Waxaan qoray codsi taageero ah dhamaadka usbuuca anigoo rajeynaya in qof uu ku caawin karo. Nasiibkeygu, si dhakhso leh ayey u soo noqdaan si ay xalka ii siiyaan.
/ Farshaxan, Talyaani
Dabacsanaan badan, oo si qurux badan looguguna talagalay dhammaan aaladaha iyo runtii taageero fiican. Waan fahmi karaa sababta ay u yihiin qoraa awood sare leh. Tayo kala duwan.
/ Agaasimaha, France
Soo hel qaybaha alaabtayada
Marwalba waad isku halleyn kartaa annaga si aan u bixinno sida ugu fiican ee aan uga gudubno rajooyinkaaga adoo u maraya taageerada macmiilka ee waxtarka leh; alaabooyinka tayada leh ee aan bixinno iyo alaabooyinka qiimaha lagu daro ee aan ognahay inay kaa ilaalinayaan inaad soo laabato.
Halkan wax na weydii
Wac caawimaad hadda!